Ku hagaaji heerka mugga ee barnaamijka App Control Control | Androidsis
Nidaamka lagu xakameynayo mugga qaybaha kala duwan, sida ogeysiisyada, wicitaanka ama digniinta, ma ahan midka aan dhammaanteen jeclaan lahayn, laakiin runtu waxay tahay tan iyo markii Android 6.0 Marshmallow la hagaajiyay wax ka mid ah waxa aan ahaa muddo aad u fog ka hor Android. Sikastaba xaalku ha ahaadee, wali waxaan raadineynaa nidaam hagaagsan oo aan ku xakameyn karno mugga ogeysiisyada ama wicitaanada, in kastoo Marshmallow ama Lollipop aan heyno astaamo aad u cajaa'ib leh, sida dhacda markaan hoos ugu dhigno mugga eber si naloo siiyo suurtagalnimada in la aamusiyo inta lagu jiro waqti ama mid gaar ah maxaa yeelay waxay ahaan kartaa illaa dhawaaqa soo socda uu dhawaaqayo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan haysanaa ikhtiyaarro leh barnaamijyo gaar ah taasi waxay ku imaan kartaa anfacaya si aan ula wareegno mugga sida aan rabno. Barnaamijkan waxaa lagu magacaabaa App Volume Control waana mid noo ogolaanaya inaan si gooni gooni ah u xakameyno mugga codka codsi kasta. Sidan oo kale waxaan ku heli karnaa mugga sare ee Gmail laakiin kala badh macaamiisha waraaqaha kala duwan ee aan haysanno ama kuwa barnaamijyada farriimaha ah ee aanan dooneynin inay nagu dhibayaan waqtiyada qaarkood ee maalinta. Sidan ayaan ku faahfaahinayaa qaar ka mid ah astaamaha iyo sida loo qaabeyn karo si looga faa'iideysto App Volume Control ee aad bilaash ku haysato, laakiin xayeysiinta ah, Google Play Store.
1 Maareynta xakamaynta mugga
2 Sida loo sameeyo mugga barnaamij kasta
Maareynta xakamaynta mugga
Volume Control App waa barnaamij dhowaan la cusbooneysiiyay si loo hagaajiyo taageerada Isbaanishka, sidaa darteed waxaan wajaheynaa daqiiqad qaas u ah codsigan inuu noqdo midka maareeya wax walba oo xiriir la leh mugga taleefankaaga.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay waxaan ka heli karnaa awood aan ku habeyn karno mugga muusigga, dhawaqa, digniinta, ogeysiisyada iyo nidaamka oo saldhig u ah dalabka, iyo maxay noqon doontaa awooddeeda gaarka ah ee wax looga beddelayo mugga markii aad codsiyada bilowdo. Maskaxda ku hay taas ogeysiis ayaa la soo bandhigi karaa marka mugga la hagaajiyo.
Kahor intaanan loo gudbin isbeddelada loogu talagalay dadka maaraynta mugga mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadooda la doonayo, Volume Control App waa lacag la'aan, inkasta oo ay leedahay nooc Pro ah oo ka saaraya xaddidaadaha iyo xayeysiinta qaarkood.
Sida loo sameeyo mugga barnaamij kasta
Markaan rakibno barnaamijka, Xakamaynta Volume App codsan doonaa in aan dhaqaajino adeegga laga bilaabo goobaha marin u helida Android. Talaabadani waxay muhiim u tahay barnaamijka inuu si sax ah u shaqeeyo oo markaad tagto goobaha marin u helka, waxaad yeelan doontaa barnaamijka si aad u dhaqaajiso.
Marka aan dib ugu noqono barnaamijka waxaan arki doonaa liiska barnaamijyada oo dhameystiran in aan ku rakibnay terminaalka. Hadda waa inaan gujino oo keliya midka aan dooneyno inaanu qaabeyno. Horeba shaashadda barnaamijka laftiisa, sida Spotify, waxaan u helnaa taxane taxane ah si aan u qaabeyno heerarka mugga ee warbaahinta, wicitaanka, digniinta, ogeysiisyada iyo nidaamka.
Haddii aan bilowno barnaamij qulqulaya muusikada sida Spotify, waxaa lagugula talinayaa ikhtiyaar cayiman si aanan u dhibsan oo aan diirada u saarno waqtigeena firaaqada, waa in aan ku dhejinno mugga warbaahinta awood buuxda iyo codadka intiisa kale eber. Haddii aan horey ugu jirno kiiska oo aan dooneyno inaan helno wicitaano, waxaan si fudud ugu wareejineynaa mugga wicitaanka nus. Halkan waad la kulmi kartaa leh astaanta ku habboon ee barnaamij kasta oo gabi ahaanba wuu ka duwanaan karaa mid kasta.
Ikhtiyaar kale oo aad u xiiso badan ayaa ah awood u leh inuu soo celiyo goobaha guud marka barnaamijku xirmo. Xaaladda Spotify, daqiiqadda aan xireyno, mugga mid kasta oo ka mid ah xuduudaha ayaa ku laaban doona asalka ah ee aad ku leedahay taleefanka.
Xakamaynta Xaddiga App waa barnaamij kaas wuxuu si gaar ah diiradda u saarayaa maaraynta xakamaynta mugga barnaamij kasta oo aan ka badnayn tan. Xusuusnow, haddii aad rabto inaad marin u hesho shaqooyinkeeda oo buuxa, ha ku qaadan waqti dheer inaad ku iibsato nooca pro-ka ah 0,99 XNUMX.
Xakamaynta Volume App
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo waafajiyo heerka mugga barnaamij kasta oo Android ah
Aan isku dayno, waan arki doonaa sida, waxaan raadinayay wax sidan oo kale ah barnaamijkan muddo dheer.
Ku jawaab Ardjlon
Waxaad horey noogu sheegtay sidee ahayd khibradaada isticmaale 🙂 Salaan!